Nwoke ahụ gara Hell
Na heaven, e nwere ngụgụ obi. Ọ bụ ebe a na-efe na ume ọhụrụ. Ma hell bụ a ebe mmekpa ahụ.
Cheta na-echeta mgbe niile na ị họọrọ ka a ga-azoputa na-agọnahụ Jesus. Ọ bụ eleghị anya ndị kasị njọ mgbu dị na hell.
Nwoke ahụ bara ọgaranya ego nwere ike ịzọpụta ya. Ego nwere ike agaghị azọpụta gị ka heaven. Ị ike ịzụta ị nzọpụta. Ọ gaghị ekwe omume.
Luke 16:19 E a ọgaranya uwe ododo na ezi ákwà ọcha na biri ụbọchị ọ bụla nke ọṅụ na ememe.
The ọgaranya biri a gbasaghị ndụ. Ọ dịrị ndụ ọtụtụ ndị na-ebi ndụ taa.
Ha na-ebi maka oge na-eche na e nwere onye na mgbe ebighị ebi mgbe ọ bụla nwere ike ekwe.
Na ọṅụ na ememe
The nwoke nwere obi ụtọ. Ọ dịrị ndụ na "ọṅụ" na "otu" kwa ụbọchị. Ndị mmadụ na-eje ije na a ndụ na-enweghị Chineke na Jizọs adịghị enweghị obi ụtọ na obi ilu.
Ha nwere ike inwe ọṅụ na ndụ ha nwere ike ịbụ a oriri. Iji ọṅụ na ndụ anaghị ekweta mgbe ebighị ebi bụ a dị iche iche okwu. Ma ha pụrụ iche na oge obi ụtọ.
Gịnị mere i kwesịrị Jesus
N'oge gara aga, otu onye nwere ike na-ekwu na ndị mmadụ mkpa ka Jizọs nwee obi ụtọ. Ma ọ bụ na ha kwesịrị Jesus-enwe obi ụtọ.
Ma nke a abụghị ihe mere i kwesịrị Jesus. Anyị na-ahụ na ndị mmadụ na na ụwa nwere ike inwe obi ụtọ na ọṅụ.
Nwoke ahụ bara ọgaranya bụ ihe atụ nke na. N'ihi ya, ọ bụghị ihe mere i kwesịrị Jesus.
Ihe mere i kwesịrị Jizọs bụ na-enweghị Jesus ị na-irretrievably n'iyi ebighị ebi na hel.
Ị na-efu na-enweghị Jesus. Iji ga-azọpụta ga-anabata Jizọs. Mgbe ahụ ị ga-azọpụta ma gị niile mmehie na-agbaghara.
Ezi ọṅụ na obi ụtọ
Ozugbo ị natara Jizọs na ọkọdọ azọpụta otú i nwere ike inwe ya obi ụtọ na ọṅụ. Nke a ọṅụ na obi ụtọ bụ karịrị nnọọ ihe ị na-emebu.
Tupu ị nwere ụwa obi ụtọ, ma ugbu a, ị ga-esi na-enweta ezi na ezi ọṅụ na Chineke.
Ma ọṅụ abụghị nzube. On niile. Nzube ya bụ na ị chọrọ ka a zọpụta na-adịghị efu.
Ị ike ịzụta ị nzọpụta
Ma ọ bụ ka gị mkpa Jesus ịba ọgaranya. Nwoke ahụ bara ọgaranya bụ na ọgaranya. Ị mkpa Jesus ga-azọpụta.
Ma ọ bụ i nwere ike ime na ị ego gị mgbe ọ bụ oge ị ga-anwụ na-ahapụ ụwa a.
Ma ọ bụ ka gị mkpa Jesus na-ofufe. Nwoke ahụ bara ọgaranya ama udo na ha na ndị ọzọ. O nwere ọtụtụ ndị enyi na enyi na.
Ọ dịghị, ọ dị gị mkpa Jesus ga-azọpụta.
Mgbe ahụ ị ga-esi na bargain ofufe na ndị enyi ọhụrụ. Ikekwe nke a bụ ọtụtụ ugboro mma obodo na enyi karịa alaeze ama n'ihu. Ha pụrụ nnọọ enyi na ya haziri ememe?
Nke ka nke bụ na ị ga-esi na Chineke mgbe ị na-enweta Jesus!
Ma ọ bụ ọ ga-esi mara mma uwe na ị chọrọ Jesus. Ọgaranya ahụ nwere niile nke a tupu.
The uwe abụghị ihe ịrịba ama na ọ na-echekwa ebighị ebi, ọ bụghị akụ na ụba ma, ma ọ bụ ya ọṅụ na ndị ọzọ na ndị enyi.
The ihe ịrịba ama na ị na-echekwa ebighị ebi, na na ụzọ heaven bụ na ị natara Jizọs na na aha gị ka e dere Book of Life na heaven!
Luke 16:20 Ma mgbe ya ụzọ ámá dina a ogbenye nwoke aha ya bụ Lazarọs, kpuchie ọnyá-ya.
Mgbe nwoke ahụ bara ọgaranya ụzọ ámá dina a ogbenye nwoke aha ya bụ Lazarọs.
Jesus egosi a ezigbo ihe omume
Jesus 'akụkọ nke ọgaranya na Lazarọs bụghị a ilu. Ọ mere eme n'ezie.
Jesus aha mgbe ilu, ma nke a kpọtụrụ Jesus, Lazarus aha. Nke a bụ n'ihi na Jizọs na-egosi a ezigbo omume.
Ọrịa na n'èzí
Ọ dị ịrịba ama na Lazarus dina na nwoke ahụ bara ọgaranya ụzọ ámá. O aba. Ọ na-iwu. Ọ-abụghị nke ha. Ọ bụ n'èzí!
Lazarus jupụtara ọnyá-ya. N'ụzọ dị iche na nwoke ahụ bara ọgaranya. O jupụtakwara ahụ ike.
Ọ bụ ezie na o jupụtakwara ahụ ike, ọ na-azọpụta ma azọpụta. Ọ na-efu.
The kasị daa ogbenye nke abụọ ndị a n'ezie n'eluigwe. Tupu n'eluigwe, ọ bụ nnọọ ogbenye n'ihi na o nwere okwukwe nke Abraham.
Nzube nke na ị chọrọ Jesus bụghị isi nwere ike. Enweghị nzube bụ n'ihi na ị na-azọpụta!
N'ihi na i nwere adịghị Jesus, mgbe ahụ, ị ​​na-irretrievably n'iyi ebighị ebi na hel.
Ọ bụ ezie na nwoke ahụ bara ọgaranya nwere na ọ dị mma nke ukwuu, ọ na-irretrievably efu.
E nwere ike na Jizọs
Ma Jesus, i nwere ike inwe ahụ ike. E nwere ike na aha ya. E na-agwọ site ọnyá ya.
Ma gịnị ka ọ nyere gị aka ma ọ bụrụ na i nwere ihe ọ bụla ahụ ike, ma ọ bụghị Jesus? Ị na-efu, na ọ bụ n'ebe ahụ na nwoke ahụ bara ọgaranya bụ!
Ọtụtụ ndị bara ọgaranya bụ ndị ogbenye
"Ogbenye mmadụ," - enye megide ala-eze. Ọtụtụ ndị ọgaranya na ihe onwunwe ụwa a, ma ha bụ ndị ogbenye n'ihi na elu.
The ogbenye ahụ bụ ọgaranya n'ebe heaven, o nwere okwukwe nke Abraham.
Ọtụtụ ndị nwere okwukwe Ebreham taa. Ha kwere na Jizọs na-azọpụta. Ha bara ọgaranya n'ihi na elu na ga-otu ụbọchị n'ebe ahụ.
Ma ndị ọgaranya na-enweghị okwukwe bụ bụghị ọgaranya n'ebe heaven, na ha na-agaghị na-aga ebe.
Ị na-anabata Jesus n'ụwa ebe a
Nke a bụ ya mere na ọ dị mkpa ka ị na ebe a na-anwụ anwụ na-anabata Jizọs na-azọpụta. Ebe ọ bụ na ọ bụ akaha.
Ọ bụ n'ụwa ebe a ị na-anabata Jizọs na-azọpụta. Mgbe ị na-anwụ, ị na-anabata Jizọs.
Mgbe ị na-anwụ, e nweghị ohere maka gị ụta maka na ichegharị ka Jizọs.
Ị na-amaghị mgbe ọ bụ oge na-anwụ anwụ
Ị na-amaghị mgbe ọ bụ oge ị ga-anwụ. Ya mere, ị chọrọ ịnabata Jizọs ugbu a mgbe e nwere oge.
Ebe ọ bụ na ọ bụ akaha.
21 Ọ gụsiri ya agụụ iri ihe ju ya afọ ihe we si nwoke ahụ bara ọgaranya table. Ee, nkịta wee na rachara ọnyá-ya.
Ikekwe, ọ bụ ọbụna nke na nkịta wee uru nke Lazarus. Ha mere na-oriri na ihe a obere mmezi "nri" ma ọ bụrụ na ha rachara ọnyá ya.
Jụrụ bụghị ọtụtụ
The ogbenye ahụ bụ mgbe niile agụụ na-agụ. Ọ nọ na-achọsi ike mkpa nke nri. Na ya vulnerability o dina n'ebe na-arọ nrọ banyere ihe oriri.
Ma ọ gwaghị ukwuu. Ọ gụsiri ya agụụ nanị mgbe na-crumbs, mgbe ndị ọgaranya tee frill n'ụba.
N'ihi ya, ọ bụ na ụmụ Chineke. Ha adịghị ịjụ ukwuu. Ha na-enwe obi ụtọ na ihe ha nwere. Ma ndị ogbenye nwoke nwere ọbụna n'ebe ahụ dị ka o kwesịrị nwere.
Ogbenye na-arịa ọrịa
Ọ dina n'ebe na n'ọnụ ụzọ, ogbenye, na-arịa ọrịa na anuri, na rọrọ nke nri na tebụl n'ime.
Ọ dịghị, ọ na-nrọ banyere ihe oriri na tebụl, ma nke crumbs n'okpuru table. Ma ọbụna ndị a crumbs o nwere ịkwụsị onwe ya.
Ndị ogbenye mkpa ọgwụ na ntị, ma ihe niile na-elekọta ya natara bụ na nkịta rachara ọnyá-ya.
Ejiri mpụga ọnụ ụzọ ámá
The nkịta n'etiti ndị kasị ala gị nwere ike iche na Israel, ma ọ bụ na ndị a na ndị ogbenye mmeko.
Ma nkịta na ogbenye na-abụghị ụzọ ámá.
Chineke hụrụ na Lazarus
The ọgaranya ahụghị Lazarus, ma ọ dị otu onye hụrụ ya na ọ bụ Chineke.
Chineke hụrụ na okwukwe ya na obi ike ya. Ndị ogbenye nwere ike ịdabere na ụwa na ụba.
Nanị onye o nwere ike ịtụkwasị obi na Chineke nke eluigwe. Ma ọ bụ nke a na-enye ezi akụ na ụba.
Lazarus ama okwukwe nke Abraham, na n'oge na-adịghị na ya ga na-eje ije n'okporo ámá nke gold.
Ndị mmụọ ozi duruo home zoputara
Luke 16:22 Ya mere, ndị ogbenye onye nwụrụ na e rụrụ site ndị mmụọ ozi na-na Abraham. Ọbụna ọgaranya nwekwara nwua, elìe ya.
Ndị ogbenye Lazarọs nwụrụ. Ma ihe dị ịtụnanya mere. Angels bịara ya.
Ndị mmụọ ozi na-ebu ya na-na Abraham. Ọ na-ada site na mmụọ ozi!
Mgbe ọ bụ oge na-anwụ anwụ n'ihi na ndị kwere na Jizọs, mgbe ahụ, ndị mmụọ ozi na ịkpọrọ ya n'ụlọ heaven. N'ihi na heaven ebe Jizọs bụ na ha kwere na tụkwasịrị.
Ị adịghị na-aga eluigwe naanị. Ndị mmụọ ozi duruo gị!
Alaeze (ofrälste) bịara kpọmkwem hell
Nwoke ahụ bara ọgaranya nwekwara nwua, elìe ya
Ma ọ bụ na nwoke ahụ bara ọgaranya. Mgbe ọ nwụrụ, n'ihi ya e nweghị ndị mmụọ ozi bịara wee ya.
Ọ na-ekwu nanị na ọ nwua, elìe ya. Ọ dịghị nke eluigwe ozi. Mgbe ahụ n'amaokwu nke ọzọ, anyị na-ahụ na ọ bụ na hell.
E nwere ndị na-adịghị ọbụna ihe ọ bụla ndị mmụọ ọjọọ na ada ya. Ma mgbe ọ nwụrụ, n'ihi ya, ọ chọpụtara na ya na nri n'ime hell.
O nweghị iduga, ma ọ bịara hell ozugbo.
Ọ bụ n'ụwa ị na-ekpebi
Gịnị a dị iche na ya pụta. Ma ọ bụ n'ụwa ebe a ị na-ekpebi ebe na-na mgbe ebighị ebi.
Nwere mgbe ebighị ebi batara, mgbe ahụ, ọ bụ akaha n'ihi na ị na-ekpebi. Ọ bụ n'ụwa ebe a ị na-ekpebi ma ọ bụrụ na ị na-aga eluigwe ma ọ bụ.
Ozugbo ị bụ nwụrụ anwụ, mgbe ahụ, ọ bụghị ọgwụgwụ. Ị ga-adị ndụ n'ime a ime mmụọ na-adịghị ala.
Anyị na-ahụ nke a karịsịa na Jizọs akụkọ nke ọgaranya na Lazarọs.
Lazarọs nwụrụ, ma ọ na-e ndị mmụọ ozi na Abraham. Na ebe e nwere a maara adị.
N'otu ụzọ ahụ na ọ bụ mgbe ị na-anwụ anwụ. Ọ bụrụ na unu bụ ndị Jesus, mgbe ahụ, ị ​​ga-ada site na mmụọ ozi n'eluigwe ebe Jizọs bụ.
Na ebe ị ga-ebi na a maara adị na Jesus.
Ndị nwụrụ na-enweghị okwukwe na Jizọs ga-aga hell, ebe ha ga-ebi na a maara adị ruo mgbe ebighị ebi.
Eche na ị ma ruo mgbe ebighị ebi na enịm ohere ịnabata Jizọs na-azọpụta.
Ọ ga-abụ egwu.
Hell bụghị na-abaghị uru
Luke 16:23 Mgbe ọ na-emekpa hell na o weliri anya-ya abua, hu Abraham n'ebe di anya, na Lazarọs na ya.
Nwoke ahụ bara ọgaranya bụ na hell. Ọ e-efu.
Ọ bụghị nanị na ọ nọ na a kpọchiri na nga na mgbe ahụ ọzọ.
Ọ dịghị, hell bụghị na-abaghị uru. E nwere a-arụ ọtụtụ ọrụ n'ebe ahụ na mgbe mechie.
Ọ na-emekpa hell. Na mmekpa ahụ a bụ na-aga n'ihu. Ọ mgbe mechie.
icheta ihe nile
The ọgaranya biri a maara adị ke hell. Na ọ na-echeta. Ọ na-echeta ndụ ya - ya ajọ ndụ.
Ọ nwere ike na-ahụ na hell. Ọ na-ekwu o lepụrụ anya. Ndị na-hell na a maara adị.
mara ndị mmadụ
Hell bi mara ndị mmadụ. Ọ ghọtara Lazarus. Ọ maara onye ọ bụ. Ọ maara na ọ bụ ya na-eji na-edina ya n'ọnụ ụzọ ámá.
Alaeze ya ugboro ugboro na-agafe Lazarus mgbe ọ ga-aga n'ụlọ ya. Ọ huru ya dina n'ebe ma ama esifịna ya.
The iju ihe bụ na ọ na-ghọtara Abraham. Ọ dịtụbeghị mgbe hụrụ ya ma maara ozugbo onye ọ bụ.
Ndị na-aga na-hell ga-aghọta na mara. Ha ga-enweta a nghọta nke ime mmụọ ma doo anya ihe mere na ha biri n'ebe ahụ.
Ha ga-amarakwa na ọ bụ eziokwu na e kwuru banyere Jesus na Ọzọkwa ha ga-amata na ha kwesịrị ka adị n'ebe ahụ. Ha apụghị agọnahụ ya.
Ekpere nzukọ hell
Luke 16:24 Ndien enye ama atua: Nna Abraham, meere m ebere ma na-ezite Lazarus iji mikpuo n'ọnụ nke mkpịsị aka ya na mmiri na ire m jụọ oyi, n'ihi na m na-emekpa a ire ọkụ.
E nwere a ekpere nzukọ hell, ma ha ga-esi dịghị omume bönerna.Det bụ n'ụwa ebe a na-ekpe ekpere Chineke na Jizọs 'aha, ma ọ bụ n'ụwa ebe a ị ga-esi zaa ekpere.
Mgbe ị na-ekpe ndị ala, ọ bụ akaha na-arịọ.
Ọ bụ n'ụwa ị na-anabata Jesus
Ọ bụ n'ụwa ị na-anabata Jizọs Kraịst na-azọpụta. Ebe ọ bụ na ọ bụ akaha. E nweghị nzọpụta na hell.
E nweghị ebere hell
Nwoke ahụ bara ọgaranya a na-akpọ si Abraham ka ebere na hell ọkụ.
Ma ọ dịghị ebere na hell.
E nweghị mmiri na Hell
Ọ na-akpọ maka mmiri. E nweghị mmiri na hell.
Ya mere, ọ chọrọ na Lazarọs ga-abịa na-enye ya mmiri. N'ihi na heaven e nwere mmiri, ma na hell e naanị ọkụ.
Ma, dị ka anyị ga-ahụ a gasịrị amaokwu, Lazarus ike gaa hell.
Ọ dịghị ihe na-esi na hell
Ọ bụ hilarious na-agụ akụkọ nke ọgaranya na Lazarọs.
Mgbe ha biri ala Lazarọs na-arịa ọrịa, ogbenye na agụụ na-agụ na-abụghị nwoke ahụ bara ọgaranya ụzọ ámá, mgbe o nwere ya ọzọ, ma ọ bụghị na-eche banyere ya.
Ugbu a ọ chọrọ Lazarus ga-abịa ya ọsọ enyemaka ma na-enye ya mmiri.
Ndị ogbenye na-adịghị ọbụna e na dara si na tebụl, na ihe yiri nke ahụ chọrọ ndị ọgaranya nwere mmiri. "Mikpuo n'ọnụ nke mkpịsị aka ya na mmiri ..." O na-arịọ maka ukwuu, ma e nwere nnọọ ihe nweta.
"N'ihi na m emekpa a ire ọkụ." Na hell, na mmekpa ahụ. Na hell e a ọkụ nke na-agaghị anyụ anyụ. Na nke a ọkụ, ọ bụ nnukwu ihe na-adị egwu mmekpa.
Ọ bụ Jizọs onye na-agwa na akụkọ nke ọgaranya na Lazarọs. Na Jizọs na-ekwu na e nwere ọkụ ala mmụọ. Na nke a ọkụ emekpa ndị mmadụ nke.
Jide n'aka na ị na-aga hell ma na ahụhụ n'ebe ahụ ọkụ ruo mgbe ebighị ebi. Ọ dịghị, ichegharị ka Jizọs ugbu a na enweta na Ya.
Ọ bụ n'ụwa ebe a ị na-anabata Jizọs Kraịst na-azọpụta. Ebe ọ bụ na ọ bụ akaha.
Ebe nchekwa nke ndụ elu ala
Luke 16:25 - Ma Abraham siri, Nwam, cheta na i natara gị ihe ọma, mgbe ị nọ ndụ, mgbe Lazarus nwetara ọjọọ. Ugbu a, ọ na-akasi obi na ị na-emekpa.
Ndị bi na hell ga-echeta enwe. Ha adịghị echezọ. N'eziokwu, ha na ọ bụghị nanị na-echeta. Ha na-echetara anyị.
Mgbe ị nwụrụ ka adịghị akwụsị ịdị adị. Ị bụ na ị na-echeta.
Ọ ga-abụ a egwu ịta. Kere hell ga-echeta mmehie ha n'ụwa.
Onye kasị ukwuu mgbu
Ha na-echeta na ha na-emehie blithely na-enweghị a echiche nke nchegharị.
Ha ga-echeta ihe niile oge ha na a kpọrọ ka ha chegharịa, ma ọ bụghị ha.
Ha na-echeta ọ bụla ohere ha nwetara na-anabata Jizọs na-azọpụta. Ma ha ejighị ha.
Nke a ga-abụ onye kasị ukwuu mgbu. Echeta ya bångstyrighet.
Ha apụghị ibo Chineke ebubo na ha gara Hell. Ha na-aghọta na ha kwesịrị ikike ịbụ na e nwere.
The ọma na ihe ọjọọ
Nwoke ahụ bara ọgaranya wee si ya mma mgbe ọ dị ndụ, ma ugbu a ọ ga-esi na ndị ọjọọ na ụmụ okorobịa. The ọjọọ ugbu a jide ya.
Mgbe Lazarus ndụ, ọ wee si ọjọọ ya, ma ugbu a ọ ga-esi na ya mma. Ọ a kwadebeere, ọ na-abịa n'ụlọ nri ebe.
"Ugbu a, ọ na-akasi obi na ị na-emekpa"
Gịnị ebe ị chọrọ ịga? Plågans ebe ma ọ bụ nkasi obi ebe?
Ọ bụ n'ụwa ebe a ị na-ahọrọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ga-esi na-nkasi-obi ebe, ị ga-anabata Jizọs.
Na ndị natara Jesus
Ọ bụ naanị na ndị natara Jizọs onye dị ọcha n'ọbara ya. Na ndị na-ọcha ọbara Jizọs nwere ike tinye heaven.
Luke 16:26 - Na ihe niile a, na ọ bụ nnukwu n'ọnụ ghere oghere dị n'etiti anyị na unu, na ndị na-chọrọ agafe si ebe a iji gị ka ị ghara ịnọ n'ebe ahụ na ma ọ bụ onye ọ bụla si n'ebe-enwe ike bịa anyị.
Ha nwere ike ịhụ n'ime paradaịs, ma ha enweghị ike na-e. Gịnị ịta nke hell bi! Ha pụrụ ịhụ paradise ma ha agaghị ịbanye n'ebe ahụ.
Ha pụrụ ịhụ paradise ebube, na-achụ akụnụba na ịma mma, ma ọ mara ha ikpe na ndụ ebighị ebi na ọkụ ala mmụọ.
Ha hụrụ mmiri rippled, ma ha emeghi nwee ike imenyụ akụ ha akpịrị ịkpọ nkụ na ya.
N'agbata hell na paradise, e a ghere nsogbu. Ọ bụ nnọọ nnukwu. Ọ dị iche paradise na hell rie.
E nweghị ohere maka ndi bi na hell na-esi na paradiset.De ike wụfee ọdịiche na paradise. Ha enweghị ike ịga n'ebe ahụ.
Ha apụghị ịrị rida na akpiri na mgbe ọzọ na n'akụkụ nke ọzọ. Ọ bụ kwa miri emi, ma ọ bụrụ na na niile e nweghị ike na ya. Eleghị anya ọ bụghị.
Eluigwe n'ọnụ ụzọ ámá
Ma ọ bụrụ na ha ekwekọghị na-atụ anya na ihe niile ga-n'ụzọ ụfọdụ na-abata n'ọnụ ụzọ ámá nke heaven, ha ga-amanye na-atụgharị. Ha ga n'ezie dịghị mgbe a ka na-n'ihi na ha na e ọcha n'ime ọbara nke Jesus.
Ọ dịghị atụgharị azụ n'ụwa
E nwekwara ụzọ na-adịghị azụ n'ụwa si hell. Ndị ụzọ hell bụ unidirectional.
E nweghị ụzọ azụ. Ndị na-arahụ hell ga-anọ ya mgbe nile.
Paradise bi na-na-echebe
Abraham gwara ọgaranya Paradise bi ma ọ bụ nwere ike na-aga hell n'ihi na nke nnukwu ọdịiche.
Nke a nwere ike iyi ihe a bit iberibe, ma ọ bụrụ na ị na-eche banyere ya na-enye nnukwu ihe nkasi obi. Ị na-azọpụta na-azọpụta na ọcha n'ime ọbara Jizọs, e nweghị ohere maka ị na-aga hell.
Ị na-azọpụta. The nnukwu ọdịiche na-egbochi gị na-aga hell. Ọ na-echebe gị. Ị adịghị mkpa a ga-nchegbu banyere a na-efu. Ị na-na-echebe.
Ị pụrụ ijide n'aka na ị ga-aga eluigwe bụ ndị kweere na Jizọs.
Olee nkasi obi.
Luke 16:27 - The ọgaranya kwuru, sị: Mgbe ahụ m na-arịọ gị, Nna, na ị na-eziga ya ka ụlọ nna m.
Mgbe nwoke ahụ bara ọgaranya ghọtara na e nweghị enyemaka maka ya na-hell ọ malitere ikpe ekpere.
O kpeghị ekpere maka onwe ya dị ka o mere tupu mgbe ọ chọrọ mmiri, ma ugbu a ọ malitere ikpe ekpere maka ndị ọzọ.
Mgbe ọ dị ndụ, ọ bụghị na-eche banyere ndị ọzọ, ma ugbu a na mberede, ọ malitere ime ya, ma ugbu a, ọ bụ akaha. Na hell, i nwere ike inwe ihe ọ bụla na-aza ekpere.
Nwoke ahụ bara ọgaranya ugbu a ghọtara na ọ dịghị mgbe ọ ga-enwe ike ịhapụ hell. Ọ pụghị-aga eluigwe ma ọ bụ n'ụwa.
Ya mere ọ jụrụ Abraham na Lazarọs ga na-alọghachi ụwa. Ọ chọrọ Abraham izipu Lazarus na ulo nna-ya.
Bad maka ezinụlọ
Mgbe nna ya na ezinụlọ, bụ ndị na ezinụlọ ya, ụmụnna nwoke na ụmụnna nwanyị, na otu nna.
Mere ọgaranya mgbe nsogbu ezinụlọ ya. Ya na ezinụlọ ya? Enyi ya? Ndị ọzọ? Ma ọ bụ, ọ bụ naanị na mmasị na ha nile na ntụrụndụ?
Bi nke Hell na-eche banyere
Ọ bụ na-akpali mara na ndi bi na hell na-eche banyere ndị na-anọgide na ụwa.
Ha na-eche banyere ha nke ukwuu nke na ha na-agaghị na-aga na-hell ebe ha bụ.
Ma nke a echiche bụ ugbu a akaha. Ha ga-ama na ọ nọ n'ụwa.
Bi n'ụwa apụghị ịnụ ekpere nke hell na ha na-achọghị ka ha na-e.
N'ihi na hell ọ dịghị atụgharị azụ.
"Ebe nke mmekpa". Ọ bụghị naanị na a na-ekpokọta ebe ma ọ dịghị ihe ọzọ. Ọ dịghị, ọ bụ a ebe mmekpa ahụ. Hel bụ ebe a na-emekpa mmadụ.
Luke 16:28 - aka m ụmụnna ise, ka ha ghara kwa abata ebe a na-emekpa mmadụ.
Nwoke ahụ bara ọgaranya na-ekpe ekpere na hell. Ọ kwụsịrị na-arịọ onwe ya mgbe ọ ghọtara na ọ na-agaghị na-enweta azịza ekpere.
Ugbu a ọ na-ajụ ya ụmụnna ise. Ọ na-ajụ Abraham izipu Lazarus ụmụnna ya aka ha.
An gbasaghị mmehie ndụ
Anyị na-aghọta na nwoke ahụ bara ọgaranya ụmụnna-ebi na Earth ke otu ụzọ dị ka o mere. Celebrations na ọṅụ kwa ụbọchị. An gbasaghị ndụ, na-enweghị a echiche nke ihe na-eru nso mgbe ebighị ebi na ebe na-emefu mgbe ebighị ebi.
Ma na hell idụhe zaa ekpere. Ọ bụ n'ụwa ebe a ị na-ajụ. Ebe ọ bụ na ọ bụ akaha.
Ndị na-aga na-hell
"Ya mere, na-adịghị na ha na-abịa n'ebe a na-emekpa mmadụ." Hel bụ ebe a nke eziokwu. Ebe ndị mmadụ nwere ike na-abịa. Na ndị na-na-na e nwere ndị na-chegharịrị nke mmadụ.
The ebe hell bụ eziokwu. Nke a bụ nke bara ọgaranya na-nwetara na ahụmahụ. Ọ ugbu a maara ihe ọ bụ a jọgburu ebe, na ọ chọghị ka ụmụnna ya ga-enweta nke a.
Ndị mmadụ na hell, ahụhụ ma emekpa. Ma ọ bụghị naanị ruo nwa oge ma na-akwụsị ya. Ọ dịghị, na-aga ruo mgbe ebighị ebi. Ruo mgbe ebighị ebi.
A ebe mmekpa ebe ndị mmadụ mgbe si bịa. Ndị a mara ikpe hell ebe mmekpa ga-mgbe mgbe na-free.
Luke 16:29 - Ma Abraham siri, Ha nwere Moses na ndi-amuma. Ha ga-ege ntị na ya.
Ha nwere Moses na ndi-amuma. "Abraham nwere ike nakwa kwuru: Ha nwere Bible.
Ọtụtụ ụlọ obibi na Sweden taa, bụ Bible. Ikekwe ila na bookshelf ekpokọta ájá, ma ha na-eme ya na agbanyeghị.
Bụkwa Ájá na Bible. Mepee ọ na-amalite na-agụ. Ma kwere na!
Ị mkpa ihe ọzọ karịa Bible
Ị mkpa ọ bụla ma Bible. Ị mkpa ọ bụla ọzọ akwụkwọ. The Bible bụ zuru ezu.
Ị chọrọ na-egosi, ị kwesịrị ị na-agụ Bible. Ị chọrọ eziokwu, ị kwesịrị ị na-agụ Bible. Mgbe ahụ ị ga-kweere na ya.
Na Jizọs na-aghọta na ị na
Ma iji nwere ikike nghọta nke Bible na ndị nwere ikike kwere, mgbe ahụ, gị mkpa Jesus. Ị ga kwere na ịmara eziokwu ahụ dị gị mkpa Jesus. Na Jesus ị maara.
Jesus na-eme ka okwu nke Bible ndụ site na Mmụọ Nsọ. Ị ga na-agụ na Bible na ndabere nke Jesus. Ya mere, ị chọrọ ịnabata Jizọs ma ọ bụrụ na ị ma mere otú ahụ.
The Bible bụ ihe Jizọs
The dum Bible bụ ihe Jizọs - si cover na-ekpuchi. Si akpa amaokwu nke ikpeazụ n'amaokwu a.
The Bible bụ banyere ihe Jizọs mere maka gị na ị ga-azọpụta mgbe ị na-enweta ya.
Bible bụ ka agwa gị otú ị ga-azoputa.
Na-ege ntị Bible
Ị mkpa ọ bụla ọzọ akwụkwọ. Ọ bụ Bible na ị ga-ege ntị ma na-eme ihe ọ na-ekwu. Ya bụ na-anabata Jizọs na-azọpụta!
E a ọgaranya uwe ododo na ezi ákwà ọcha na biri ụbọchị ọ bụla nke ọṅụ na ememe. Ma na ya ụzọ ámá dina a ogbenye nwoke aha ya bụ Lazarọs, kpuchie ọnyá-ya. Ọ gụsiri ya agụụ iri ihe ju ya afọ ihe we si nwoke ahụ bara ọgaranya table. Ee, nkịta wee na rachara ọnyá-ya.
Ya mere nwụrụ ndị ogbenye na ndị e weere site ndị mmụọ ozi na-na Abraham. Ọbụna ọgaranya nwekwara nwua, elìe ya. Mgbe ọ na-emekpa hell na o weliri anya-ya abua, hu Abraham n'ebe di anya, na Lazarọs na ya. Ọ kpọ, si, Nna Abraham, meere m ebere ma na-ezite Lazarus iji mikpuo n'ọnụ nke mkpịsị aka ya na mmiri na ire m jụọ oyi, n'ihi na m na-emekpa a ire ọkụ.
Ma Abraham siri, Nwam, cheta na i natara gị ihe ọma, mgbe ị nọ ndụ, mgbe Lazarus nwetara ọjọọ. Ugbu a, ọ na-akasi obi na ị na-emekpa. Na ihe niile a, na ọ bụ nnukwu n'ọnụ ghere oghere dị n'etiti anyị na unu, na ndị na-chọrọ agafe si ebe a iji gị ka ị ghara ịnọ n'ebe ahụ na ma ọ bụ onye ọ bụla si n'ebe-enwe ike bịa anyị.
Nwoke ahụ bara ọgaranya sịrị: Mgbe ahụ m na-arịọ gị, Nna, na ị na-eziga ya ka ụlọ nna m aka m ụmụnna ise, ka ha ghara kwa abata ebe a na-emekpa mmadụ.
Ma Abraham siri, Ha nwere Moses na ndi-amuma. Ha ga-ege ntị na ya.
Ọ dịghị, nna Abraham, 'ọ zara, ma ọ bụrụ na mmadụ na-aga ha n'ọnwụ, ha ga-echegharị.
Abraham we si ya, Ọ buru na ha anughi olu Moses na ndi-amuma, ha ga-agaghị ekweta ọbụna ma ọ bụrụ na onye na-ebili n'aka ndị nwụrụ anwụ. "
Vecka 20, måndag 17 maj 2021 kl. 18:22